February | 2009 | Moe Nay
သခင်အောင်ဆန်း တရား၊ ပြောလိုက်ပါဘိ ဟောပါဘိ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာတင်လိုက်ပါတယ်။
ငါ့ညီပြောင်ဝင်းမောင်သစ်ဆင်း
ဆန်း၏ သမာဓိ၊ ဆန်း၏ပညာ
လူငယ်အောင်ဆန်း၊ သူ့အစွမ်းကို ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်၊ ပန်ဆင့်တင့်သို့
ကြုံရာဘ၀၊ မုတလုံလောက်၊ ခံမြို့ဆောက်၏
ရိုးကျင့် မြင့်ကြံ၊ သူ့အလံတည့်
ပျံတလူလူ၊ သူ ထူခဲ့ကြောင်း
လမ်းစဉ်သတင်း၊ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁၄(၁၅၊ ၇၊ ၁၉၆၆)
သက် နှစ်ဆယ်ပင် ပြည့်ခဲ့ပြီ။
ပျံကြ ၀ဲကြ၊ ငရဲထသို့
ငါ ကြားခဲ့၏ မှတ်မိ၏။
မြေခ သတင်း၊ မိုးကြိုးခွင်းသို့
မျက်စိ မျက်နှာ၊ ညှိုးကျရှာသည်
ရွာဦးပိုင်းမှ သချုင်္ိင်းထိ။
ဆန်း၏ပညာ ဆန်းမှာ ဆုံပေါင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဗျာများ၊ ဇူလိုင် ၁၉၆၄
ဒီကဗျာမှာ နေရာမှားတဲ့ ၂၄နှစ်သားတွေကို သနားတယ်။
လမ်းမသိဘဲ လျှောက်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေက
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က
တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ကြက်တွန်လို့ မိုးစင်မှန်းမသိ
မိုးစင်လို့ ကြက်တွန်မှန်းမသိတဲ့ မနက်ခင်းတွေနဲ့သာ
တ၀ိုးတ၀ါး နေ၀င် မိုးချုပ်…
ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲတွေနဲ့ …. လွဲ
အပေါ်ကြေးပေါက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ …. လွဲ
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်က ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဖြေထွက်တဲ့
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ … လွဲ
လိုချင်တာ အကြိုက်ပေး အမိုက်လေးတွေ ဘေးလာရပ်တဲ့ နိုက်ကလပ်တွေနဲ့ ….လွဲ
ဆေးရောင်စုံ ရုပ်ရှင်ရုံထဲက အတူပျော်ဇာတ်လမ်းအနမ်းလေးတွေနဲ့… လွဲ
မိုးထိလုလု အထပ်မြင့်မြင့် မျှော်စင်ကြီးတွေနဲ့ … လွဲ
င၀ိုင်းမပါရင် မလာစေချင်တဲ့ စက်ရုပ်လူရိုင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့.. လွဲ
ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ခါချဉ်ကောင်ဒေါသတွေနဲ့… လွဲ
ကမ္ဘာမှားမှာ နာဖျားနေသူ ကော်ဖီပူပူလေးနဲ့ … လွဲ
လူမဲ့သူမဲ့ ပူနေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ …. ။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဘ က် ထွက်ငေးရင်
စက်ရုပ်လူရိုင်းတွေကြား အဓိပါယ်မှား အပြောခံထိရင်း
အဆုတ်ကို နာနာထိတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်တွေကို မီးဆက်ညှိရင်း
ရင်ဘတ်ကို လာလာကလိတဲ့ လောင်းရိပ်တွေကို အံဆက်ကြိတ်ရင်း
ဒီနေရာက ၂၄နှစ်သားတွေကို ငါ သနားတယ်။
You are currently browsing the Moe Nay blog archives for February, 2009.